မွတျစှာဘုရားရှငျ၏ခွတေျောရာအစဈနှဈဆူ ကို ဖူးမွျောနိုငျကွစရေနျရညျရှယျပွီး တငျပေးလိုကျပါတယျ – Youth Bar
မွောကျဦးဆရာတျောဘုရားကွီးရဲ့ ကောငျးမှုကွောငျ့ မကွာခငျ မှာ ဖူးမွျောခှငျ့ ရရှိတော့မယျ မွတျဗုဒ်ဓ၏ မအီခွတေျောရာ အစဈ(နှဈဆူ) အကွောငျး .
မဟာသက်ကရာဇျ (၁၂၃) တှငျ ရခိုငျပွညျ့ရှငျ စန်ဒာသူရိယမငျး၏ အဓိဌာနျပွု ပငျ့လြှောကျခကျြအရ မွတျစှာဘုရားရှငျသညျ …ရဟန်တာ ငါးရာခွံရံလကျြ၊ ဒသေစာရီ ကောငျးကငျခရီးဖွငျ့ ကွှမွနျးတျောမူခဲ့ပါသညျ။
တရားဟောကွားတျောမူပွီးနောကျ မငျးကွီး၏ တောငျးပနျ လြှောကျထားခကျြအရ၊ကိုယျစားတျောအဖွဈ မုနိလေးဆူကို ရငျငှတေ့ျော ခုနှဈအုပျသှငျးကာ သှနျးလုပျပူဇျောဖို့ ခှငျ့ပွုတျော မူပွီးနောကျ၊ တောငျစဉျ ခုနှဈခရိုငျသို့ ဆကျလကျ၍ ဒသေစာရီ ကွှမွနျးတျောမူခဲ့သညျ။
ဘုရားရှငျသညျ မအီ၊ အမျး၊ မနျး မွဈသုံးခု စတငျစီးဆငျးရာ၊ တွိနဒီတောငျ (မွငျမတိနျ) တောငျ သို့ ရောကျရှိတျောမူသောအခါ၊လကျယာတျောရံ ရှငျမဟာသာရိပုတ်တရာကိုယျတျော၏လြှောကျထား မှုကွောငျ့၊ဘုရားရှငျသညျ ဤနရောဒသေ၌ နုစဉျဘဝ အခါကာလက ကငျြလညျပွီး၊ ပါရမီဖွညျ့ဆညျးတျောမူကွောငျးကိုဟောကွားတျော မူကာ….
ဤတောငျခွေ မအီမွဈကမျးပါးဘေးဝယျ၊ နောငျအခါ မွို့ငယျ တဈခု တညျ၍ မဟိ (မအီ) မွို့ဟု တှငျလတ်တံ့ဟု အစခြီ၍၊ ဤဒသေ ၌ “ငါဘုရား ဓါတျတျော၊ မှတေျော မြားစှာ ကိနျးဝပျတျောမူလိမျ့ မညျ” ဟု ဗြာဒိတျတျောစကား မိနျ့ကွားကာ ထားတျောမူခဲ့ပါသညျ။
မဟီမွဈအတှငျးရှိ မဏိသလရေအေိုငျ၌လညျးငါဘုရားသညျ မဏိသလေ နဂါးမငျးအဖွဈ ကငျြလညျခဲ့ပွနျဖူးသေးသညျ” ဟု အစခြီကာ တရားဓမ်မမြားကို မုဆိုးကွီးအားဟောကွားတျော မူပါသညျ။
မုဆိုးကွီးသညျ မွတျစှာဘုရားရှငျ၏ တရားတျောကို နာကွားခဲ့ပွီး နောကျ အကြှတျတရားရကာ၊ မွတျစှာဘုရားရှငျအား ဘုရားရှငျ ကိုယျစား ကိုးကှယျရာအဖွဈပေးသနားတျောမူရနျလြှောကျထား တောငျးပနျတျောမူရာ၊
ထို့နောကျ မငျးနှငျ့တကှ ပွညျသူမြားက မုဆိုးကွီး၏ ပွနျလညျ ပွောပွခကျြအရ ဘုရားရှငျအား သှားရောကျဖူးမွျောကွပွီး၊ခွတေျောရာအနီးတှငျ ရဟနျးပွု၍ တရားအားထုတျကွရာ၊ တရားထူးမြား ကိုယျစီအသီးသီး ရကွ၍ ကြှတျတမျး ဝငျကွလေ ကုနျ၏။
ဤသို့ဖွငျ့ ဓညဝတီ၊ ဝသောလီ၊ လေးမွို့၊ မွောကျဦးခတျေတိုငျအောငျ စညျကားစှာ ပူဇျောမပကျြရှိခဲ့ကွပွီး၊နောကျပိုငျးတှငျ နှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျ တိမျမွုပျသှားပါသညျ။
ခွတေျောရာအား ပူဇျောကွပါက၊ခကျြခငျြး လကျငငျး၊ လောကီ လောကုတ်တရာ အကြိုးစီးပှားမြား ဒိဋ်ဌခံစားစံစားရခွငျး စသညျ့ အထူးထူးသော အံ့ဖှယျဆနျးပွားတျောမူသောစကျခွတေျောရာ မြား ဖွဈကွပါသညျ။
ထိုသို့သော စကျတျောရာမြားကို ယခုအခါ ကြေးဇူးရှငျ မွောကျဦး ဆရာတျောဘုရားကွီးမှလမျးပနျးဆကျသှယျ သှားလာရေး အထူး ကောငျးမှနျစရေနျ နှငျ့ ဒကာ၊ ဒကာမမြား စကျတျောရာမြားကို စိတျခမျြးခမျြးသာသာ ဖူးမွျောနိုငျကွစရေနျ သာသနာပွုဆောငျရှကျတျောမူနပေါသညျ။
ရှားရှားပါးပါး အပြင်မှာ ဖူးတွေ့မြင်နိုင်မယ့် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ခြေတော်ရာအစစ်နှစ်ဆူ ကို ဖူးမြော်နိုင်ကြစေရန်ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.
မြောက်ဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် မကြာခင် မှာ ဖူးမြော်ခွင့် ရရှိတော့မယ် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ မအီခြေတော်ရာ အစစ်(နှစ်ဆူ) အကြောင်း .
မဟာသက္ကရာဇ် (၁၂၃) တွင် ရခိုင်ပြည့်ရှင် စန္ဒာသူရိယမင်း၏ အဓိဌာန်ပြု ပင့်လျှောက်ချက်အရ မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် …ရဟန္တာ ငါးရာခြံရံလျက်၊ ဒေသစာရီ ကောင်းကင်ခရီးဖြင့် ကြွမြန်းတော်မူခဲ့ပါသည်။
တရားဟောကြားတော်မူပြီးနောက် မင်းကြီး၏ တောင်းပန် လျှောက်ထားချက်အရ၊ကိုယ်စားတော်အဖြစ် မုနိလေးဆူကို ရင်ငွေ့တော် ခုနှစ်အုပ်သွင်းကာ သွန်းလုပ်ပူဇော်ဖို့ ခွင့်ပြုတော် မူပြီးနောက်၊ တောင်စဉ် ခုနှစ်ခရိုင်သို့ ဆက်လက်၍ ဒေသစာရီ ကြွမြန်းတော်မူခဲ့သည်။
ဘုရားရှင်သည် မအီ၊ အမ်း၊ မန်း မြစ်သုံးခု စတင်စီးဆင်းရာ၊ တြိနဒီတောင် (မြင်မတိန်) တောင် သို့ ရောက်ရှိတော်မူသောအခါ၊လက်ယာတော်ရံ ရှင်မဟာသာရိပုတ္တရာကိုယ်တော်၏လျှောက်ထား မှုကြောင့်၊ဘုရားရှင်သည် ဤနေရာဒေသ၌ နုစဉ်ဘဝ အခါကာလက ကျင်လည်ပြီး၊ ပါရမီဖြည့်ဆည်းတော်မူကြောင်းကိုဟောကြားတော် မူကာ….
ဤတောင်ခြေ မအီမြစ်ကမ်းပါးဘေးဝယ်၊ နောင်အခါ မြို့ငယ် တစ်ခု တည်၍ မဟိ (မအီ) မြို့ဟု တွင်လတ္တံ့ဟု အစချီ၍၊ ဤဒေသ ၌ “ငါဘုရား ဓါတ်တော်၊ မွေတော် များစွာ ကိန်းဝပ်တော်မူလိမ့် မည်” ဟု ဗျာဒိတ်တော်စကား မိန့်ကြားကာ ထားတော်မူခဲ့ပါသည်။
ထိုမှတဖန် မအီချောင်းဖျားရှိ နာဠာဂီရိတောင်သို့ ကြွတော်မူပြီး၊တြိသလေမည်သော ဆင့်တင်တောင်ကျောက်ဆောင်တွင် ဆင်မင်း ဘဝကျင်လည်၍၊ဆင်ညီတော် ဆင်ငယ်ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော အညာတောင်ရွာသား မုဆိုးကြီး ဦးစံလှအား…
ငါဘုရားသည် “ဆင်မင်းဘဝ ဤနေရာ၌ ကျင်လည်ကျက်စားကာ ပါရမီဖြည့်ဆည်းတော်မူခဲ့ပြီး၊ ဒကာတော် ဦးစံလှမှာ ငါဘုရားလောင်း ဆင်မင်း၏ ညီတော် ဆင်ငယ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊
မဟီမြစ်အတွင်းရှိ မဏိသလေရေအိုင်၌လည်းငါဘုရားသည် မဏိသလေ နဂါးမင်းအဖြစ် ကျင်လည်ခဲ့ပြန်ဖူးသေးသည်” ဟု အစချီကာ တရားဓမ္မများကို မုဆိုးကြီးအားဟောကြားတော် မူပါသည်။
မုဆိုးကြီးသည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ တရားတော်ကို နာကြားခဲ့ပြီး နောက် အကျွတ်တရားရကာ၊ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဘုရားရှင် ကိုယ်စား ကိုးကွယ်ရာအဖြစ်ပေးသနားတော်မူရန်လျှောက်ထား တောင်းပန်တော်မူရာ၊
မြတ်စွာဘုရားသည် နောင်လာမည့် အနာဂတ်တွင် လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တဝါများ၊ လောကီ၊ လောကုတ္တရာ အကျိုးတရား ဖြစ်ထွန်းမည်ကို သိမြင်တော်မူ၍ ကိုယ်စားတော်အဖြစ် ပူဇော်နိုင်စေရန်၊
တရားဟောကြားတော် မူခဲ့သော ယခု နာဠာဂီရိ ဆင့်တင်ကျောက်ဆောင်ပေါ်တွင်“လက်ဝဲစက်တော်ရာ” တစ်ဆူကိုလည်းကောင်း၊မဏိသလေကျောက်ဆောင်၌“လက်ယာဘက်စက်တော်ရာ” တစ်ဆူကိုလည်းကောင်းအဓိဋ္ဌာန်ပြု ချပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။
မုဆိုးကြီးဦးစံလှသည် မြတ်စွာဘုရားပေးသနားတော်မူသော ထိုစက်တော်ရာ နှစ်ဆူအား၊မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ဂုဏ်တော်များကို အာရုံပြုကာ၊ ခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင် ပူဇော်ပြီးမှ ရွာသို့ ပြန်လေသည်။
ထို့နောက် မင်းနှင့်တကွ ပြည်သူများက မုဆိုးကြီး၏ ပြန်လည် ပြောပြချက်အရ ဘုရားရှင်အား သွားရောက်ဖူးမြော်ကြပြီး၊ခြေတော်ရာအနီးတွင် ရဟန်းပြု၍ တရားအားထုတ်ကြရာ၊ တရားထူးများ ကိုယ်စီအသီးသီး ရကြ၍ ကျွတ်တမ်း ဝင်ကြလေ ကုန်၏။
ဤသို့ဖြင့် ဓညဝတီ၊ ဝေသာလီ၊ လေးမြို့၊ မြောက်ဦးခေတ်တိုင်အောင် စည်ကားစွာ ပူဇော်မပျက်ရှိခဲ့ကြပြီး၊နောက်ပိုင်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် တိမ်မြုပ်သွားပါသည်။
မအီစက်တော်ရာ၏ ထူးခြားတော်မူသော ဝိသသေများ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စက်တော်ရာ (၁၂) ဆူရှိသည့်အနက်၊ တစ်ဆူတည်းသော “ညာဘက်”စက်တော်ရာ ဖြစ်နေတော်မူခြင်း။
လူသူအရောက်အပေါက်နည်း၍ ဆိတ်ငြိမ်အေးချမ်းသော အရပ်တွင်ရှိ၍ မူလအတိုင်း ဖူးတွေ့နိုင်ခြင်း။
တစ်ကြိမ်တစ်ခေါက် ဖူးမြော်ပြီးပါက အကြိမ်ကြိမ် ဖူးမြင်လိုခြင်း။
လူခြေတိတ်ဆိတ်သော အခါကြီး ရက်ကြီး လပြည့်နေ့များ၏ ညဘက်များတွင် ဂဠုန်၊ နဂါး၊ နတ်သိကြား ဒေဝါများ လာရောက်ဖူးမြော်သည်ဟု ဟူဆရသော ထွန်းလင်းသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များအား မြင်တွေ့ရတတ်ခြင်း။
တပေါင်း၊ တန်ခူး၊ ကဆုန် လများ၏ လပြည့်ည ရောက်ခါနီး ညများတွင်၊ ခြေတော်ရာ တည်ရှိရာနေရာမှ၊ ရောင်ခြည်တော်များ ကွန့်မြူးတော်မူသည်ကို၊ (၅)မိုင်အကွာရှိ တောင်ပေါ် ယာတဲများကပင် ဖူးတွေ့နိုင်ခြင်း။
စက်တော်ရာအနီးတွင် တွေ့ရှိရသော ကျေးငှက်များ၊ တိရိစ္ဆာန်များ နှင့် ငါးများအား အန္တရာယ်ပြုမိပါက၊ ချက်ချင်းလက်ငင်း ပြန်၍ ဘေးဒုက္ခခံစားရခြင်း။
စက်တော်ရာများအား မသင့်လျော်သော အပြုအမူများဖြင့် ယစ်ပူဇော်ခဲ့ကြသောကြောင့်၊ လူမျိုးတစ်စုလုံး ဘေးဆိုးကြုံကာပျောက်ကွယ်သွားရခြင်း။
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဗျာဒိတ်တော် တည်ရာနေရာဖြစ်၍၊ မြင့်မြတ်သောနေရာ ဖြစ်နေခြင်း။
ဖူးမြင်ရသူတို့၏ စိတ်နှလုံးတွင်အေးချမ်းပြီး၊ ကြည်ညိုမဆုံး ဖြစ်ကြရခြင်း။ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ စက်ခြေတော်ရာ အစစ်ကြီး ဖြစ်တော်မူခြင်း။
ခြေတော်ရာအား ပူဇော်ကြပါက၊ချက်ချင်း လက်ငင်း၊ လောကီ လောကုတ္တရာ အကျိုးစီးပွားများ ဒိဋ္ဌခံစားစံစားရခြင်း စသည့် အထူးထူးသော အံ့ဖွယ်ဆန်းပြားတော်မူသောစက်ခြေတော်ရာ များ ဖြစ်ကြပါသည်။
ထိုသို့သော စက်တော်ရာများကို ယခုအခါ ကျေးဇူးရှင် မြောက်ဦး ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှလမ်းပန်းဆက်သွယ် သွားလာရေး အထူး ကောင်းမွန်စေရန် နှင့် ဒကာ၊ ဒကာမများ စက်တော်ရာများကို စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ ဖူးမြော်နိုင်ကြစေရန် သာသနာပြုဆောင်ရွက်တော်မူနေပါသည်။
အခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းသာယာပျော်ရွှင်သောနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဝတျပွုရှိခိုးလြှငျ ဘာကွောငျ့ သုံးကွိမျ ဦးခရြသလဲ